चीन ब्रोकन ब्ल्याक टी कारखाना र निर्माताहरु Yibin चिया
ब्रोकन कालो टीईए
टूटेको कालो चिया बिग्रेको वा दानायुक्त चियाको एक प्रकार हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय चिया बजारमा थोक उत्पादन हो, जुन विश्वमा चियाको कुल निर्यात मात्राको 80०% हो। योसँग १०० बर्ष भन्दा बढिको उत्पादन ईतिहास छ।
मुख्य बजार सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, युक्रेन, पोल्याण्ड, रसिया, टर्की, इरान, अफगानिस्तान, बेलायत, इराक, जोर्डन, पाकिस्तान, दुबई र अन्य मध्य पूर्वी देशहरू।
ताजा र कडा गन्ध
भाँचिएको कालो चिया एक प्रकारको भाँचिएको वा दानायुक्त चिया हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय चिया बजारमा थोक उत्पादन हो। यो कुल वैश्विक चिया निर्यातको 80०% को लागी जिम्मेदार छ। योसँग १०० भन्दा बढी उत्पादनको ईतिहास छ।
समाप्त कालो चिया भाँडामा वा दाँतदार छ, सूप चहकिलो रातो छ, गन्ध ताजा छ, स्वाद मीठो छ।
मुड्ने, घुमाउने वा घुँडा टेक्ने, फर्मेन्टि dry, सुक्ने
टूटेको कालो चिया उत्पादन प्रक्रिया अनुसार परम्परागत र गैर पारंपरिक प्रक्रियामा विभाजित छ। गैर परम्परागत प्रक्रिया रोटरभेन प्रक्रिया, CTC प्रक्रिया, लेजर प्रक्रिया र LTP प्रक्रियामा विभाजित छ। उत्पादनको गुणवत्ता र विभिन्न तयारी प्रक्रियाको शैली फरक छन्, तर टुक्रि black कालो चियाको र class्ग वर्गीकरण र प्रत्येक प्रकारको देखावट विवरणहरू समान रूपमा हुन्। टुक्रिएको कालो चियालाई चार रंगका विशेषताहरुमा विभाजन गरिएको छ: पात चिया, टुटेको चिया, काटिएको चिया, र पाउडर चिया। पात चिया बाहिर स्ट्रिपहरू बाहिर बाहिर कडा गाँठहरू, लामो glumes, एकसमान, शुद्ध रंग, र सुन (वा थोरै वा कुनै सुन) को आवश्यक छ। एन्डोप्लाज्मिक सूप चम्किलो रातो (वा चम्किलो रातो) हो, यसको कडा सुगन्ध र चिलाउने हुन्छ। यसको गुणानुसार, यसलाई "फ्लोरी ऑरेंज पेकोइ" (FOP) र "सुन्तला पहेंलो पेकोो" (ओपी) मा विभाजित गरिएको छ। टुक्रिएको चियाको आकार दानाकार हो, र ग्रान्युलहरू तौलमा एक समान हुनु आवश्यक हुन्छ, केहि सेन्ट (वा कुनै सेन्ट) हुँदैन, र चिल्लो रंग। भित्री सूपको एक मजबूत रातो रंग र एक ताजा र बलियो गन्ध छ। गुणको आधारमा, यसलाई "फ्लाउरी सुन्तला र पहेंलो पेकोई" (फ्लावरी) मा विभाजन गरिएको छ। ब्रोकन अरन्ज पोको (FB.OP), "ब्रोकन ऑरेंज पोको" (BOP), ब्रोकन पेको (बीपी) र अन्य र colors्गहरू। काटिएको चियाको आकार फg्गसको आकारको फ्ल्याक्स हो, यो भारी हुन आवश्यक छ र पनी, सूप रातो र उज्यालो छ र सुगन्ध बलियो छ। गुणको आधारमा, यसलाई "फ्लोरी ब्रोकन ऑरेंज पेको फोनिंग" (FBOPF) र "FBOPF" (FBOPF भनेर चिनिन्छ) मा विभाजित गरिएको छ। BOPF), "पेक्को चिप्स" (PF), "नारंगी चिप्स" (OF) र "चिप्स" (एफ) र अन्य डिजाइनहरू। पाउडर चिया (छोटोका लागि धुलो, D) बालुवा अन्नको आकारमा छ, र एक समान तौल र चिल्लो रंग आवश्यक छ। भित्री सूप रातो र केही गाढा छ, र गन्ध बलियो छ र थोरै छिटो छ। माथिका चार प्रकारका लागि, पात चियाले चियाका टुक्राहरू समावेश गर्न सक्दैन, फुटेको चियामा चियाको फ्लेक्स हुँदैन, र पाउडर चियामा चियाको राख हुँदैन। विशिष्टताहरू स्पष्ट छन् र आवश्यकताहरू कडा छन्।
१. तापमान: उच्च तापक्रम, चियाको गुणस्तर चाँडो परिवर्तन हुनेछ। चियाको खैरो गति हरेक दस डिग्री सेल्सियस वृद्धिको लागि -5- times पटक बढ्छ। यदि चिया शून्य डिग्री सेल्सियस भन्दा कम ठाउँमा भण्डार गरिएको छ भने, चियाको बुढेसकाल र गुणस्तर गुम्न सकिन्छ।
२ नमी: जब चियाको ओसको मात्रा 3% हुन्छ, चिया र पानीको अणुहरूको संरचना एकल-तह आणविक सम्बन्धमा हुन्छ। त्यसकारण, लिपिडलाई अक्सिडेटिभ बिगार्न रोक्नको लागि हावामा भएको अक्सिजन अणुहरूसँग प्रभावकारी रूपमा छुट्याउन सकिन्छ। जब चिया पातहरूको ओसिलो मात्रा%% भन्दा बढी हुन्छ, तब ओसलाई घोलकमा रूपान्तरण गरिन्छ, गहन रासायनिक परिवर्तनको कारण र चिया पातहरूको खराबीलाई तीव्र गर्दछ।
O. अक्सिजन: चियामा पोलीफेनोलहरूको ऑक्सीकरण, भिटामिन सीको ऑक्सीकरण, र अफिफ्लेभन्स र थेरुबिगिन्सको अक्सिडेटिभ पोलिमराइजेसन सबै अक्सिजनसँग सम्बन्धित छ। यी ऑक्सीकरणले बासी पदार्थ उत्पादन गर्न र चियाको गुणस्तरलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ।
Light. प्रकाश: प्रकाशको विकिरणले विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको प्रगतिलाई गति दिन्छ र चियाको भण्डारणमा अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। प्रकाशले बोटको रments्गीन वा लिपिडहरूको ऑक्सीकरणलाई बढावा दिन सक्छ, विशेष गरी क्लोरोफिल प्रकाशद्वारा लुप्त हुने सम्भावना हुन्छ, र पराबैंगनी किरणहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
द्रुत भण्डारण विधि: चिया प्याक गर्नुहोस्, सिरेमिक वेदीको वरिपरि स्तरीय औंठी मिलाउनुहोस्, त्यसपछि कपलको झोलामा द्रुतपट्टी प्याक गर्नुहोस् र यसलाई चियाको झोलाको बीचमा राख्नुहोस्, वेदीको मुख बन्द गर्नुहोस्, र यसलाई सुक्खामा राख्नुहोस्, राम्रो ठाउँ। उत्तम छ कि द्रुत झोला ब्याग प्रत्येक १ देखि २ महिनामा परिवर्तन गर्नु।
कोइला भण्डारण विधि: १००० ग्राम कोइला को सानो कपडाको झोलामा लिनुहोस्, यसलाई टाइल वेदी वा सानो फलामको बक्सको तल्लो भागमा राख्नुहोस्, र त्यसपछि प्याक गरिएको चिया पातहरू यसको माथि तहहरूमा व्यवस्थित गर्नुहोस् र मोहरको मुख भर्नुहोस्। वेदी चारकोल एक महिनामा एक पटक प्रतिस्थापित गर्नुपर्नेछ।
फ्रिजरेट गरिएको भण्डारण विधि: नयाँ चियालाई फलाम वा काठको चिया क्यानमा%% भन्दा कमको ओसिलो सामग्रीको साथ राख्नुहोस्, क्यानलाई टेपसहित मोहर लगाउनुहोस्, र यसलाई ° डिग्री सेल्सियसमा फ्रिजमा राख्नुहोस्।
अघिल्लो: सिचुआन कांगौ कालो चिया
अर्को: Kuding चिया